Obstructive Sleep Apnea (အိပ်ပျော်နေစဉ် အသက်ရှူကြပ်ခြင်း ) - Hello Sayarwon
Obstructive Sleep Apnea (အိပ်ပျော်နေစဉ် အသက်ရှူကြပ်ခြင်း )
Wathun Myat Chal မှ ရေးသားသည်။ 04/12/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Obstructive Sleep Apnea (အိပ်ပျော်နေစဉ် အသက်ရှူကြပ်ခြင်း ) ကဘာလဲ။
Sleep Apnea ဆိုတာကတော့ အိပ်ပျော်နေစဉ်မှာ အသက်ရှူခြင်းကို ကြိန်ဖန်များစွာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ မူမမှန်တဲ့ ရောဂါတစ်ခုပါ။ ရလဒ်အနေနဲ့ကတော့ ဒီအခြေအနေရှိသူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေ အထူးသဖြင့် ဦးနှောက်ဟာ အောက်စီဂျင်မလုံလောက်တော့ဘဲ အိပ်ရေးမဝတာကြောင့် နေ့ဘက်တွေမှာပါ တစ်နေကုန်လုံး ပင်ပန်းနေတတ်တာပါ။ Sleep Apneaမှာ အဓိက ပုံစံ ၂မျိုးရှိပါတယ်။
Obstructive sleep apnea: လေပြွန်ပိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ အဖြစ်များတဲ့ ပုံစံ။
Central Sleep apnea: ဒါကတော့ လေပြွန်ပိတ်လို့ဖြစ်ရတာမဟုတ်ပါဘဲ အသက်ရှူစနစ်ထိန်းချုပ်တဲ့နေရာက မတည်ငြိမ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ ဦးနှောက်က ကြွက်သားတွေကို အသက်ရှူဖို့ သတင်းမပို့နိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Obstructive Sleep Apnea (အိပ်ပျော်နေစဉ် အသက်ရှူကြပ်ခြင်း ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ အလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ ယှဉ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာ ဒီရောဂါရှိရင် အမျိုးသား ၂ယောက်ကနေ ၃ယောက်အတွင်းမှာ ဒီရောဂါရှိနေနိုင်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သက်လတ်ပိုင်းတွေမှာ တွေ့ရများပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Obstructive Sleep Apnea (အိပ်ပျော်နေစဉ် အသက်ရှူကြပ်ခြင်း ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Sleep Apnea ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
ခံတွင်းခြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် လည်ချောင်းနာခြင်းကြောင့် နိုးခြင်း
နေ့ဘက်တွင် အလွန်အမင်းအိပ်ချင်ခြင်း (Hypersomnia)
သင့်မှာ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်တွေထဲက တစ်ခုခုရှိခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။
အခြားသူတွေ သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်သင်တောင် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလောက်သည်ထိ အကျယ်ကြီး ဟောက်ခဲ့ရင်
အသက်ရှူမဝရင်၊ အိပ်ရာကနေ လန့်နိုးစေသည်ထိ လေမြိုမိခြင်း သို့မဟုတ် ကြို့ထိုးခြင်း
အိပ်ပျော်နေစဉ် မကြာမကြာ အသက်ရှူခဏရပ်ခြင်း
နေ့ဘက်တွင်လည်း အလွန်အကျွံ မိန်းမောခြင်း
ပင်ပန်းခြင်း၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း
Obstructive Sleep Apnea (အိပ်ပျော်နေစဉ် အသက်ရှူကြပ်ခြင်း ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Obstructive sleep apnea နဲ့ Central sleep apnea တို့ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ကွာခြားကြပါတယ်။
Obstructive sleep apnea မှာတော့ လည်ချောင်းနောက်က ကြွက်သားတွေနားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ လေပြွန်ကျဉ်းသွားပြီး အသက်ရှူတဲ့အချိန်မှာ ပိတ်သွားပါတယ်။ ဒါဟာ လူနာရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ထဲက အောက်စီဂျင်ကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ အသက်မရှူနိုင်ခြင်းဟာ အချက်ပြနေပြီး အသက်ပြန်လည်ရှူနိုင်ဖို့ လူနာကို အိပ်ပျော်ရာက ဦးနှောက်က နှိုးပါတော့တယ်။ ဒီလို နိုးလာခြင်းကတော့ သာမန်လူတွေမှာလည်း အဖြစ်များပြီး မမှတ်မိတတ်ကြပါဘူး။
Central sleep apnea ကတော့ လူနာရဲ့ဦးနှောက်ဟာ အသက်ရှူမယ့်ကြွက်သားတွေဆီ အချက်လှမ်းမပြနိုင်တာပါ။ ဒါဟာ ကြွက်သားတွေကို ခေတ္တအသက်မရှူအောင် တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ လူနာဟာ အသက်ရှူမဝခြင်းကြောင့် နိုးလာနိုင်တာမျိုးတွေ ဒါမှမဟုတ် အိပ်ပျော်ဖို့ ခဲယဉ်းတာတွေ ၊ တောက်လျှောက်အိပ်မပျော်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Obstructive Sleep Apnea (အိပ်ပျော်နေစဉ် အသက်ရှူကြပ်ခြင်း ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Sleep Apnea ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
Obstructive sleep apnea အတွက်ဆိုရင်
အမျိုးသားဖြစ်နေခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ပိုနေခြင်း၊ အသက်၄၀ကျော်နေခြင်း၊ neck circumference များနေခြင်း (အမျိုးသားတွေမှာတော့ ၁၇လက်မနဲ့အထက်ရှိနိုင်ပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာ ၁၆လက်မနဲ့အထက် ရှိနိုင်ပါတယ်) tonsils ကြီးခြင်း၊ လျှာကြီးခြင်း သို့မဟုတ် မေးရိုးသေးခြင်း၊ sleep apnea မျိုးရိုးရှိခြင်း၊ Gastroesophageal reflux သို့မဟုတ် GERD ၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ စွဲခြင်း ၊ ဆေးသုံးခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း စတာတွေဖြစ်ပြီး
Central sleep apnea အတွက်ဆိုရင်တော့
သက်လတ်ပိုင်း သို့မဟုတ် သက်ကြီးပိုင်းဖြစ်နေခြင်း၊ နှလုံးမူမမှန်ခြင်း၊ methadone ကဲ့သို့သော ဆေးမျိုး သုံးစွဲရခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း စတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Obstructive Sleep Apnea (အိပ်ပျော်နေစဉ် အသက်ရှူကြပ်ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Sleep Apnea အတွက် စမ်းသပ်ချက်တွေမှာတော့
Home sleep tests : သင့်ရဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်း၊ သွေးတွင်းအောက်စီဂျင်လယ်ဗယ်၊ လေစီးဆင်းမှုနဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ စနစ်စတာတွေကို လေ့လာမှုတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Obstructive Sleep Apnea (အိပ်ပျော်နေစဉ် အသက်ရှူကြပ်ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Obstructive sleep apnea ကို ကုသမှုတွေမှာတော့
Continuous positive airway pressure (CPAP ): လူနာအိပ်ပျော်နေချိန်အတွင်း နှာခေါင်းပေါ်အုပ်ထားတဲ့ mask မှတ်ဆင့် လေဖိအားပို့တဲ့ ပစ္စည်းကို အသုံးပြုခြင်း။
Bilevel positive airway pressure (BiPAP) : CPAP နဲ့ဆင်တူတဲ့ ကိရိယာကို အသုံးပြုတာဖြစ်ပေမယ့် အသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါ ဖိအားများများပေးပြီး ပြန်ရှူထုတ်တဲ့အခါ ဖိအားနည်းနည်းသာပေးတဲ့ ကိရိယာကို အသုံးပြုခြင်း
Expiratory positive airway pressure (EPAP) : အိပ်မပျော်သေးခင်မှာ သေးငယ်တဲ့ တစ်ခါသုံးပစ္စည်းလေးတွေကိုသုံးပီး လေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှူသွင်းနိုင်စေဖို့နဲ့ ရှူထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ လေကို ထည့်ထားတဲ့ ကိရိယာရဲ့ အပေါက်သေးသေးတွေကနေ ထွက်သွားစေခြင်း
Oral apliances: လည်ချောင်းပွင့်နေစေဖို့ oral appliance တွေကို အသုံးပြုရပါတယ်။ ဒါကတော့ CAPA ထက် ပိုပြီးလွယ်ကူပါတယ်။
ခွဲစိတ်ခြင်း : အထက်ပါ ကုသမှုတွေအားလုံး အလုပ်မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့
တစ်သျှူးဖယ်ရှားခြင်း : ပါးစပ်နောက်ပိုင်းနဲ့ လည်ချောင်းအရှေ့က တစ်သျှူးတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ Tonsils တွေနဲ့ Adenoids တွေကိုလည်း အများအားဖြင့် ဖယ်ရှားလိုက်ရပါတယ်။
မေ့ဆေးပေး၍ အာခေါင်ပျော့အတွင်း ပလတ်စတစ်အချောင်းငယ်သွင်းခြင်း
လေဖြတ်သန်းသွားနိုင်မယ့် လမ်းသစ်ဖန်တီးခြင်း (Tracheostomy : သတ္တု သို့မဟုတ် ပလတ်စတစ်ပြွန်ထည့်ခြင်း)
နှာခေါင်းပေါက်တွေကြားမှာရှိတဲ့ လမ်းကြောင်းအကွေ့တွေကို ဖြောင့်တန်းစေခြင်း သို့မဟုတ် Polyps တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ နှာခေါင်းတွင်း ခွဲစိတ်ခြင်း
အလေးချိန်လျှော့ချခြင်း စတာတွေ ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Central Sleep apnea အတွက် ကုသခြင်းမှာတော့
ဆက်စပ်နေတဲ့ အခြားသော ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို ကုသခြင်း။ Sleep apnea ဖြစ်စေတဲ့ နှလုံး သို့မဟုတ် neuromuscular ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းကို ကုသခြင်း
အောက်စီဂျင် အပိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။ အိပ်ပျော်နေစဉ် အောက်စီဂျင်အပိုဖြည့်ဆည်းခြင်း (အောက်စီဂျင်ပေးခြင်း))
Adaptive servo-ventillation (ASV) : အသက်ရှူစနစ်ကို ပုံမှန်ဖြစ်စေမယ့် airflow ကိရိယာကို သုံးပြီး အသက်ရှူခေတ္တရပ်ခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်း
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Sleep Apnea ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Sleep Apnea ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ငြိမ်ဆေး၊ အိပ်ဆေး စသကဲ့သို့သော ဆေးတွေနဲ့ အရက်ကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း
ပက်လက်အိပ်ခြင်းထက် ဘေးစောင်း သို့မဟုတ် မှောက်အိပ်ခြင်း
ညဘက်မှာ နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းတွေ ပွင့်နေစေခြင်းစတာတွေပါဝင်တဲ့ အပြင် တကယ်လို့များ သင်က ဆေးလိပ်သမားတစ်ယောက် ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။
Reference: Sleep Apnea. http://www.webmd.com/sleep-disorders/sleep-apnea/sleep-apnea. Accessed July 8, 2016.
Sleep apnea. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sleep-apnea/basics/definition/con-20020286. Accessed July 8, 2016.
ဟောက်တတ်သူတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ
ကျန်းမာအောင် ပုံစံမှန်မှန် အိပ်ကြမယ်